Qalabka Maaraynta Dijital ah ee Sonkorowga-Xalka Qalabka Maareynta Dijital-Sinocare
Xalka Qalabka Maareynta Dijital ah
Qalabka Maaraynta Dijital ah ee Macaanka
Qodobbada Xanuunka Maaraynta Sonkorowga
Sonkorowgu wuxuu noqday dhibaato caafimaad oo caalami ah, waxaana sii kordhaya baaxadda cudurka macaanka, taas oo bulshada iyo shakhsiyaadka u keenta culeys culus. Waxaa intaa dheer, oo ka dambaysa tirada badan ee dadka sonkorowga qaba, waxaa jira dhibaato ah heerka xakamaynta sonkorta dhiigga oo hoosaysa, iyo u hoggaansamidda bukaanka oo hooseysa ayaa ah sabab muhiim u ah heerka xakamaynta hooseysa U hoggaansanaanta hoose waxay kordhin doontaa halista dhibaatooyinka. Marka laga eego dhinaca bulshada iyo warshadaha, kororka dhibaatooyinka macaanka waxaa loola jeedaa kororka isbitaalka iyo kharashyada caafimaadka, kororka culeyska caymiska caafimaadka iyo kororka u dhigma magdhawga caymiska ganacsiga; Isla mar ahaantaana, sababta oo ah dawooyinkii ay ahayd in bukaanku isticmaalo waa kuwo aan waxtar lahayn oo tilmaamayaashii ay ahayd in la kormeero lama samayn, mugga iibka ee shirkadaha dawooyinka iyo qalabka ayaa sidoo kale saameeyay.
Waagii hore, u hoggaansanaanta maaraynta bukaanada sonkorowga wuu hooseeyay, taas oo ay ugu wacnayd la'aanta xog-ururinta hufan iyo qalabka maaraynta Xog badan oo dhinacyo badan leh ayaa ah aasaaska aasaasiga ah ee falanqaynta dabeecadda bukaanka iyo maareynta shaqsiyeed. Maaddaama uu yahay soo-saaraha mitirka gulukoosta dhiigga ee lixaad ee adduunka, Sinocare waxay siin kartaa qalab wax-garad oo wax-garad ah tilmaamayaasha kala duwan (sonkorta dhiigga, uric acid, cadaadiska dhiigga, lipid-ka dhiigga, saccharification, iwm), waxay la shaqeeyaan codsiyada taleefanka gacanta, waxayna si wadajir ah u bixiyaan qalab xog ururin iyo maareyn hufan oo loogu talagalay bukaannada.
Maaraynta Dijital ah iyo Qalabka Ogaanshaha ee Sonkorowga
Sinocare waxay bixisaa gulukoos dhiig oo tayo sare leh, lipid dhiig, uric acid iyo aalado kale oo wax lagu ogaado oo leh natiijooyin sax ah iyo waxqabad aad u fiican, waxayna bixin kartaa xalal kala duwan ee gudbinta iyo maareynta xogta.
Macaamiisha lagu dabaqi karo
Shirkadaha dawooyinka/shirkadaha waxsoosaarka daryeelka caafimaadka
Ururka maaraynta caafimaadka internetka
Shirkadda caymiska ganacsiga
1. Sinocare waxay bixisaa aaladaha ogaanshaha caqliga leh ee Bluetooth iyo borotokoolka isgaarsiinta Bluetooth ama SDK, kaasoo geli kara macaamilka ama qofka saddexaad APP si loo xaqiijiyo gudbinta xogta iyo kaydinta otomaatiga ah.
2. Sinocare waxay bixisaa aaladaha wax -garadka garaadka ee Bluetooth, sidoo kale waxay bixisaa Sinocare gaar ahaan maamulka gulukooska dhiigga APP iyo asalka, si loo xaqiijiyo xaraynta diiwaannada caafimaadka bukaanka, ogaanshaha tusmada, gudbinta xogta otomaatiga ah, kaydinta otomaatiga ah, falanqaynta otomaatiga ah iyo taariikheed dib u eegista diiwaanka.
3. Wadashaqayn qoto dheer: Sinocare waxay bixisaa qalab caqli badan iyo adeegyo softiweer loo habeeyay iyadoo loo eegayo baahida macmiilka.